ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ ဘင်္ဂါလီကုလားများ သတ်ဖြတ်မှုပြုပြန်
ရာကြောင့်ဦးစိန်ရွှေမောင်နှင့် ဇနီးတို့နှစ်ဦးစလုံးဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာ ရရှိသွားကြသည်။
Posted by သဇင်ရနံ့at 19:29 No comments:
"ဖေဖေ ၊ သားကျောင်းစာကို ကူပါဦး ၊ နိုင်ငံရေးဆိုတာ ဘာလဲတဲ့ "
မောင်ဖြူစင်က သူ့ဖခင်အား အကူအညီတောင်းလိုက်သည်။
ဖခင်က…" အေးသားသားသဘောက်ပေါက်အောင်အတိုချုပ်ရှင်းပြမယ်။ဖေဖေက ပိုက်ဆံ
ရှာပြီး အိမ်ယူလာတယ်၊ဖေဖေ့ကို အရင်းရှင်လို့ ခေါ်နိုင်တယ်။သားမေမေက ဒီပိုက်ဆံတွေ
ကို စနစ်တကျ စီမီခန့်ခွဲပြီးသုံးစွဲတယ်။ဒါ့ကြောင့်သားမေမေကိုအစိုးရလို့ခေါ်နိုင်တယ်။ဖေေ
ဖတို့ကသားကိုပြုစုစောင့်ရှောက်တယ်။ဒါ့ကြောင့်သားကို ပြည်သူလို့ခေါ်ရမယ်။သားရဲ့ ညီ
လေးကိုကြတော့ အနာဂတ်လို့ခေါ်ရမယ်၊ ရှင်းရဲ့လားသား ဒါဟာ နိုင်ငံရေးပဲ။ "
သွားကြည့်ရာ သူ၏ညီလေးမှာ အနှီးထဲတွင်အညစ်အကြေးများ(ချီး)ပေကျံနေသည်ကိုတွေ့
ရသည်။အဲဒါနဲ့ သူဟာသူ့အဖေ နဲ့ အမေအိမ်ခန်းသို့တခါးဖွင့်ဝင်ကြည့်ရာမိခင်တစ်ယောက်
တည်း အိပ်မောကျနေသည်ကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ဒါနဲ့မောင်ဖြူစင်လေးဟာမိခင်ကိုလှုပ်နိုး
ဒီလိုနဲ့ မောင်ဖြူစင်လေးဟာ နိုင်ငံရေးအကြောင်းကို ဆရာမနှင့် သူ့အခန်းဖော်သူငယ်ချင်း
ပဲ။ပြည်သူကို လုံးဝ ပစ်ထားတယ်၊ အနာဂါတ်ဟာလဲ ညစ်ပတ်နံစော်နေတာပဲ "
ဒီဟာသတွေကို မျှဝေပေးတဲ့ညီလေး ခိုင်မြတ်စိုး ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Posted by သဇင်ရနံ့at 12:09 No comments:
ဒုက္ခပေးလျှက်ရှိသော ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ စစ်တကောင်းသားများ(နိဂုံးပိုင်း)
တွင် ထားရှိသော ဥပဒေတစ်ရပ်(၀ါ)ကာကွယ်ထားသော ''ဒိုင်း'' ဖြစ်ပါသည်။ မိမိနိုင်ငံအတွင်းသို့ အကြောင်း
အမျိုးမျိုးကြောင့်ဝင်ရောက်လာသောဧည်သည်များကို ကာကွယ်တားဆီးရန် အစိုးရတိုင်း၊ တိုင်းရင်းသားတိုင်း
မြို့နယ်များတွင် (၈၀)ရာခိုင်နှုန်းခန့် စစ်တ ကောင်းသား ကုလားများ လွှမ်းမိုးသွားပြီဖြစ်ပါသည်။ ယခင်က
မောင်တောမြို့တစ်ခုတည်းမှာပင် ရခိုင်ရွာပေါင်း(၁၉၂)ရွာရှိခဲ့ ရာယခုတစ်ရွာမှမရှိတော့ပါ။ အကြောင်းအမျိုး
မျိုးပြ၍စဉ်ဆက်မပြတ်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လျှက်ရှိနေသည်ကို မြန်မာနိုင်ငံ သားတိုင်း စိတ်မကောင်းကြီးစွာ
လည်းအောင့်ကာနမ်း" ဆိုသလိုလူသားအချင်းချင်းစာနာထောက်ထား၍ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရသည်ခိုလှုံနားနေ
ခွင့်ပေးထားခဲ့ပါ သည်။ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဤမျှလောက်သဘောကောင်းသော နိုင်ငံရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ယခုတ
လော ကျီးအာသလိုအာနေကြသော နိုင်ငံအချို့သည် မြန်မာနိုင်ငံကြုံတွေ့ရသော အခက်အခဲကို သူတို့မသိ၍
မဟုတ်ပါ။လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရန်ဟူ သော အကြောင်းပြချက်မူတစ်ခုတည်းနှင့်ပြဿနာတစ်ခုကို
နိုင်ငံ အတွက် မည်မျှအန္တရာယ်များကြောင်း ယနေ့ကမ္ဘာ့ဖြစ်ရပ်အမျိုးမျိုးဒုက္ခအဖုံဖုံက သက်သေပြလျှက်ရှိပါ
သည်။သာဓကအချို့ဖော်ပြပါမည်။ စင်္ကာပူကျွန်းသည်မလေးရှားနိုင်ငံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဗြိတိ
သျှအစိုးရ သည် တရုတ်လူမျိုးနှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားများကို ဥပဒေမဲ့အတားအဆီးမရှိဝင်ရောက်ခွင့်ပေးခဲ့သည်။
နိုင်ငံခြားသားအများစုဖြစ်သော တရုတ်နှင့် ကုလားများကမလေးရှားနှင့်ပူးပေါင်းရန်သဘောမတူခဲ့ပါ။နောက်
ဗြိတိသျှအစိုးရသည် သူတို့နေလျှက်ရှိသော ဗြိတိသျှကျွန်းကို စင်္ကာပူကျွန်းပုံစံမျိုးမည်သည့်အခါမှ ပြုကျင့်လိမ့်
သည် သီရိလင်္ကာကျွန်းမြောက်ပိုင်းကို ''တိုက်ဂါး'' ဟူသော တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းအမည်ဖြင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်
ယခုအခါထိုင်းနိုင်ငံ၏တောင်ပိုင်းဒေသကိုမူဆလင်များကခွဲထွက်အ ရေးဆို၍တောင်း ဆိုနေ ကြပြီးဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဟု အသိအမှတ်ပြုထားသော နိုင်ငံနယ်နမိတ်သည်အဓိကမဟုတ်ပါ။ ယင်းနေရာ
ယင်ဒေသတွင် နေထိုင်လျှက်ရှိသော လူနယ်နိမိတ် သည်သာလျှင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏နယ်နိမိတ်အစစ်အမှန်ဖြစ်
ထို့ကြောင့်မြန်နိုင်ငံအစိုးရ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန၏ ဆောင်ပုဒ်တစ်ခုမှာမြေမျို၍လူမျိုးမပျောက်၊လူမျိုမှလူ
မျိုးပျောက်မည် ဟု ရုံးရှိနံရံတွင် ချိတ်ဆွဲထားရှိသည်မှာ မြန်မာအမျိုးသားတိုင်း အလေးထားအပ်သောဆောင်
မြန်မာနိုင်ငံရောက် စစ်တကောင်းသား ကုလားများသည် ၁၉၄၈ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရလာ၍ ဖဆပလခေတ်ကာလတွင် ရခိုင်ဒေသကိုအများဆုံးဒုက္ခပေးသောလူမျိုးစုဖြစ်လာပါသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်
ကာလအတွင်း ဗြိတိသျှတပ်များ ဆုတ်ခွာ၍ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရား ပျက်ပြားနေချိန်တွင် အခွင့်ကောင်းယူ၍
ဆိုးဆိုးဝါးဝါးအလွန်ပင် ထကြွသောင်းကြမ်းခဲ့ပါသည်။ ၁၉၄၂ ခုနှစ်ဘူးသီးတောင်မြို့တွင်အရေးပိုင်ဦးကျော်ခိုင်
အသတ်ခံရပါသည်။ မောင်းတော မြို့သရီကုန်းကျေးရွာတွင်အလုပ်ကိစ္စနှင့်အသွားနယ်ပိုင်ဦးထွန်းဦးအ
ကမ္ဘာပေါ်တွင် စံတင်ရလောက်အောင် ရက်စက်မှုတစ်ခုကိုဤဆောင်းပါးတွင် ဖော်ပြပါမည်။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်
မောင်တောမြို့မှမြေတိုင်စာရေးများဖြစ်ကြသော ဦးကျွန်ဒေါင်းနှင့်ဦးမောင်မောင်ဦးတို့သည် မင်္ဂလာဦးကျေးရွာ
သို့အသွားမူဂျာဟိမ်းသူပုန်ခေါင်းဆောင်ကာဆိမ်းတို့အဖွဲ့က ဖမ်းဆီး၍ နားရွက်၂ဖက်နှင့်နှာခေါင်းထိပ်ဖျားများ
ဆောင်ကာဆိမ်းအပြင်ဇာဖာဟူဆိမ်း၊ဒူဒူများ၊အိုဝင်အူလာတို့သည်တစ်ဗိုလ်ကျ တစ်ဗိုလ်တက်နှင့် နှစ်ပေါင်း
(၄၀)ကျော်မြေလှန်စနစ်သုံး၍ယုတ်မာရက်စက်စွာ လူပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ကိုသတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။
၁၉၄၈ ခုနှစ်မှ ၁၉၆၂ ခုနှစ် ကာလအတွင်း လက်နက်ကိုင် သောင်းကျန်း၍တစ်ဖုံ နိုင်ငံရေးစင်မြင့်ပေါ်တက်၍
တဖုံ၊အမျိုးအကြောင်းပြပြီး တောင်းသင့် မတောင်းသင့်ဖြစ်နိုင်၊မဖြစ်နိုင် မစဉ်းစားဘဲလွတ်လပ်သော ကိုယ်ပိုင်
အုပ်ချုပ်ခွင့်အထိပင် လက်ရဲဇက်ရဲ တောင်းဆိုလာကြသည်။
၁၉၅၀ ခုနှစ်မောင်တောမြို့နယ်အလယ်သန်ကျော်ညီလာခံမှတောင်းဆိုခဲ့ကြသောအချက်များမှ (၁၂) ချက်ကို
အနှစ်ချုပ်ဖော်ပြရလျှင်ရခိုင်နယ်မြေ မြောက်ပိုင်းကို​ မူဆလင်သီးခြားပြနယ်ထူထောင်ရန်(ဆိုလိုသည်မှာ
မောင်တော၊ဘူးသီိးတောင်၊ ရသေ့တောင် မြို့နယ်အထိကို ဆိုလိုသည်)။ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ပိုင်းကို ရခိုင်နှင့်
မူဆလင် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းစီအခွင့်အရေးတန်းတူပေးရမည်ဟု တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။
တင်ပြရန် နောက်တစ်ချက် ကျန်ပါသေးသည်။ စစ်တကောင်းသား ကုလားများမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ဝင်
ရောက်၍ အခြေချလာသည်မှာ နှစ် ၅၀ မကျော်သေးပါ။ သမိုင်းမှတ်တမ်းများက သက်သေထူလျက်ရှိပါသည်။
ဘူးပါ။ ဤကိစ္စကိုမြင်တတ်ရန် လွန်စွာအရေးကြီးပါသည်။ရခိုင်များသည် ဘင်္ဂါလားဒေ့(ခ်ျ)ဒေသတွင်နှစ်ပေါင်း
သလို ရခိုင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်သည်လည်း နှစ် ၁၀၀ အတွင်းမှာကုလားအမျိုးသ မီးတစ်ဦးနှင့် ခြေချော်
လူမျိုးမတူ ဘာသာမတူသော်လည်း တစ်မြေတည်းနေ တစ်ရေတည်းသောက်ကြ၍အတူတကွနေကြသည်မှာ
အလွန်ပင်ချစ်စရာကောင်းသောဓလေ့တစ်ခုကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။သာဓက တစ်ခုကို ထုတ်နှုတ်တင်ပြမည်။
လွန်ခဲ့သော နှစ် ၁၀၀ ကျော်ကပင်းဝါသားရခိုင်ပွဲစားကြီးဦချီစားရှီ ()ကျောင်းကန်ဘုရား၊ရေတွင်းရေကန်အပါ
အ၀င်အထက်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းကို ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခဲ့ဘူးပါသည်။ကျောင်းအမည်မှာ The Ramu KheSa Rhee English High School ဟု အမည်တပ်ခေါ်ဝေါ်စေခဲ့ပါသည်။
ယင်းကျောင်းသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ခန့်က မီးလောင်သွားခဲ့ရာဘင်္ဂါလားဒေ့-(ခ်ျ) အစိုးရကအသစ်
ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ကျောင်းအမည်ကို ပြောင်း၍ RamuGovernment High School ဟုအမည်ပြောင်းခဲ့
အလွန်ကြီးမားပါတယ် ကျောင်း၏အမည်ကို ယခင်နာမည်ထားပေးဟုဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့၍အစိုးရကပင်လိုက်
လျော၍ ယခင်နာမည်ဟောင်းကို ပြန်ပြောင်း၍ပေးခဲ့ရသည်။
ဤမျှအထိပင် ဘင်္ဂါလားဒေ့(ခ်ျ)တွင် နေထိုင်ကြသောရခိုင် များနှင့် ဒေသခံလူများမှာတစ်သွေးတည်းတစ်သား
တည်းအတူတကွနေထိုင်လျက်ရှိကြသည်ကို ရခိုင်ပြည်နယ်ရောက်စစ်တ ကောင်းသားများကနမူနာယူသင့်ပါ
သည်။ဘင်္ဂါလားဒေ့(ခ်ျ)ရောက်ရခိုင်အနောက်သားများနှင့် ရခိုင်ရောက်စစ်တကောင်း သားများ၏ ပြုမူချက်
သည် အထက်တွင်ရေးပြခဲ့သလို မိုးနှင့်မြေလို ကွာခြားပါသည်။
အကျယ်မရေးတော့ပါ။ မြန်မာရောက်မူဆ လင်များကတစ်ဘက်သတ်အနိုင်ယူမှုကြောင့်မြန်မာအမျိုးသမီး
များစွာနစ်နာခဲ့ရ၍ဘာသာကွဲလူမျိုးခြားအမျိုးသားများနှင့်အိမ်ထောင်ပြုသော ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင်မိန်းမများ၏
တစ်ဖက်သက်နစ်နာချက်များကို ၁၉၅၄ ခုနှစ်ဗုဒဘာသာဝင်မိန်းမများ အထူးထိမ်းမြားမှုနှင့်အမွေဆက်ခံမှု
အက်ဥပဒေကိုပြဋ္ဌန်းပြီးအကာအကွယ်ပေးခဲ့ရသည်အထိ နိုင်ငံတော်အစိုးရက လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။
နောက်ထပ်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို တင်ပြပါမည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက ဗြိတိသျှရေတပ်စခန်းဖြစ်သော
စင်္ကာပူ ကျွန်းကို ဂျပန်များသိမ်းပိုက်ပြီးနောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံရောက်ကုလား(၄) သိန်းကျော်ခန့်ကလေးတစ်
မူးလမ်းကြောင်းမှတဆင့် မိနိုင်ငံ အိန္ဒိယသို့ခိုလှုံခဲ့ရပါသည်။နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးသည်မည်မျှပင်နှစ်ပရိစ္ဆေဒ ကြာညောင်း၍ အဝေးရောက်နေထိုင်စေကာမူ သူတို့၏ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်အမိမြေ(ဘူမိနက်သန်မြေ)ကိုစိတ်
ထဲဖျောက်ဖျက်၍ မရပါ။ အရေးကြုံ၍လူတစ်ယောက်ဒုက္ခရောက်လာလျှင်အမေလဲ အမေဘယ်မှာလဲ(ကုလား
လို အိုမာဟုအမေ့ကိုတကြရစမြဲပါ။ မြန်မာပြည်ရောက်ကုလားအမျိုးသားအရေးကြုံ၍အိန္ဒိယသို့ပြန်ကြသလို
သမီးကို နှင်ချရိုးထုံးစံမရှိပါ။အချိန်မရွေးမိဘများကခရီးဦကြိုဆိုလျှက် လက်ခံရစမြဲပင်ဖြစ်ပါသည်။
ဘင်္ဂါလားဒေ့(ခ်ျ)နိုင်ငံတွင် လူဦးရေ သန်း ၁၄၀ ကျော်ရှိပါသည်။ မောင်တောမြို့နယ်မှအကြောင်းအမျိုးမျိုး
ကြောင့်ဝင်ရောက်လာသော စစ်တကောင်းသားကုလား(သူတို့အပြောရိုဟင်ဂျာလူမျိုး) ဦးရေသောင်းဂဏန်း
မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရကအဝေးရောက်နေသော နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအတွက်ထုတ်ပြန်ထားသောဥပဒေတစ်ခု
ရက်စွဲ၊၁၉၄၈ ခု၊ ဧပြီလ(၃) ရက်
အကြောင်းအရာ ။ ။ မြန်မာတိုင်းရင်းသားများနှင့် ပြောင်းရွှေ့လာသူရခိုင်ဗုဒဘာသာဝင်များအားလူဝင်မှုဥပဒေ
နှင့်နိုင်ငံသား ဥပဒေအရ လျှောက်ထားခြင်းမှကင်းလွတ်ခွင့်ပြုပေးပါရန်ကိစ္စ
မြန်မာနိုင်ငံသို့ခွင့်ပြုချက်(သို့မဟုတ်) မှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြားများ တစ်စုံတစ်ရာမလိုပဲ လွတ်လပ်စွာဝင်ရောက်နိုင်
သည်။သို့လင့်ကစား၊အဆိုပ်လူထုများဝင် ရောက်လာချိန်တွင် ရေလမ်းခရီး၊လေလမ်းခရီးတို့မှသွားရေးလာရေး
အဆင်ပြေရန် သက်သေခံကဒ်ပြားတစ်ခုထုတ်ပေးရန်လို အပ်ပါသည်။
ချက်အရ ထုတ်ပေးရမည်။အဆိုပါကဒ်ပြားများမှာ ရိုက်နေဆဲဖြစ်၍ပို့ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
များဖြစ် လင့်ကစားမြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေအရ သံသယကင်းရှင်းစွာမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်သည့်လူမျိုးဆိုင်ရာ
မြန်မာတိုင်းရင်းသားအဖြစ်ငုတ်လျှိုးနေခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေဖြင့် တစ်ဖက်နိုင်ငံရှိရခိုင်
ဗုဒ္ဓဘာသာများကိုမြန်မာ့တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ် မှဆင်းသက်လာများဖြစ်သည်ဟု အသိအမှတ်ပြုထားသည်ဖြစ်
-အတွင်းဝန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၆-၁၂-၄၇ နေ့ရက်စွဲပါ စာအမှတ်အမ်အပ်ဖ်အေ
၄၇ အရေး ဆောင်ရွက် နိုင်ရန် ပေးပို့ပါသည်။
-ခရိုင်ရဲဝန်ထောက်( နိုင်ငံခြားစုံစမ်းရေး) မှုခင်းစုံစမ်းရေးဌာန
၁၉၈၇ ခုနှစ် နဂါးမင်းစစ်ဆင်ရေးကာလ တွင် အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၂၅၉၀အိမ်ထောင်လူဦးရေ၁၅၆၆၀၀ ကို
ထိုကြောင့်သူတို့အပြောအရ မောင်တော၊ ဘူးသီးတောင်၊ ရသေ့တောင်၊ စစ်တွေမြို့များတွင် နေထိုင်လျက်ရှိ
ကြ သော ဂိုဟင်ဂျာများကို မြန်မာအစိုးရကမောင်းထုတ်လိုက်သည်ထားပါဦး။ သူတို့မိခင်နိုင်ငံဘင်္ဂါလား
နိုင်ငံက လက်မခံ၍ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်များနေစရာမရှိ ဒုက္ခဘာကြောင့်ရောက်နေရသည်ကို ပထမဆုံးတွေး
-ယဉ်ကျေးမှုတူ အမိနိုင်ငံရှိပါသည်။ နိုင်ငံမဲ့လူမျိုးစုမဟုတ်ပါ။
နှစ်ပေါင်း ၁၉၄၈ နှစ်ကျော်ခန့် နိုင်ငံမဲ့ဖြစ်နေသောဂျူးလူမျိုးများပင်နောက်ဆုံးသူတို့နယ်မြေသို့ အမှန်တကယ်
ရောက်လာခဲ့သော သာဓကရှိပါသည်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရောက် ရိုဟင်ဂျာများသည်မြန်မာနုိုင်ငံတွင်နေထိုင်ကြ
ပြော၊အဖက်ဖက်က အဆင်မပြေလျှင် အမိနိုင်ငံ ဘင်္ဂလားဒေ့(ခ်ျ) သို့ပြန်ရုံသာရှိပါသည်။မလေးရှား၊ ထိုင်း၊
တစ်နိုင်ငံသို့ ဒုက္ခသည်အဖြစ် ခိုလှုံခွင့်တောင်းရန်အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီး နိုင်ငံမရှိဖြစ်နေရသည်ဟု ကမ္ဘသိ
ဆရာ ဦးအေးသိန်း ၏ဆောင်ပါးအား မူရင်းအတိုင်း ဖေါ်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Posted by သဇင်ရနံ့at 13:12 No comments:
ဒုက္ခပေးလျှက်ရှိသော ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ စစ်တကောင်းသားများ
ရိုဟင်ဂျာနှင့် ပတ်သက်ပြီး အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုထားသော စာတမ်းတစ်ခုအား စာဖတ်ပရိသတ်များ ဖတ်ရှုနိုင်ရန်
၁။ ရိုဟင်ဂျာ အမည်ခံဒုက္ခသည်များသည် မောင်တောမြို့နယ်မှ မောင်းထုတ်လိုက်သောမြန်မာနိုင်ငံသားဒုက္ခ
၂။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်နေထိုင်လျှက်ရှိသောရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်များဟု မ်ညာပြီးနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များတွင်ဒုက္ခ
သည်အဖြစ်ခိုလှုံရန် ကျိုးစားကြသော လူကုန်ကူးခံဘင်္ဂါလားဒေ့ခ်ျနိုင်ငံမှ စစ်တကောင်း သားများ ကုလားများ
၃။ ရိုဟင်ဂျာဟူသော ဝေါဟာရအခေါ်အဝေါ်သည်ပင်လျှင်လူမျိုးစုတစ်စု၏အမည်ပင်မဟုတ်ပဲ`ဒသသုံးစကား
၄။ လိမ်ညာပြောဆိုသော စကားများကို အမှန်ထင်ပြီး နိုင်ငံအချို့ကပင်အတွင်းနိုက်၍ မလေ့လာပဲ မစုံစမ်းပဲ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်လျှက်ရှိသော လူမျိုးစုတစ်စုဟုသုံးစွဲလျှက်ရှိနေသည်မှာအံ့သြစရာပင်အလွန်ကောင်း
ပါသည်။ရိုဟင်ဂျာ ( ) ဟူသောဝေါဟာရ ဆင်းသက်လာပုံနှင့် လုံးကောက်အဓိပ္ဂါယ်ရှင်းလင်းချက်ရေးသား
ဘင်္ဂါးလားဒေရှ့် နိုင်ငံ (အရှေ့ပါကစ္စတန်) တွင်နေထိုင်သော ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများသည်အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များ
ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့လူမျိုး ယောင်္ကျားများဝတ်ဆင်သောအင်္ကျီင်္သည်ပိတ်သားဖြူပါးပါးကိုတင်ပါးဖုံးသည်အထိ
အကျီင်္ ပါးကို အပေါ်မှ အောက်သို့ ဖါးလျားချ၍၀တ်ဆင်ကြသည်။
မြန်မာလူမျိုးများသည် အကျီင်္ကိုအရောင်အမျိုးမျိုးနှင့်ဝတ်ဆင်ပြီးအကျီင်္စကိုလုံချည်အတွင်းသွင်း၍ ၀တ်ဆင်
ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများက ``အရောင်´´(Colour)ကို ရွင် ( Roum) ဟုအသံထွက်ပြောဆိုကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရခိုင်
လူမျိုးများနှင့် ရခိုင်ဒေသကို ရောင်စုံအ၀တ်ဝတ်ဆင်သောလူမျိုးများဟု ခေါ်၍ ရခိုင်ဒေသနှင့်ရခိုင်လူမျိုးများ
ကိုညွှန်း၍ ပြောဆိုသောအခါ ရွင်(Roum) လူမျိုးများ၏ `` ရွင်ဒေသ´´ ဟုပြောဆိုတက်ကြပါသည်။ (ရခိုင်ကို မောက်(Mulk) ဟုခေါ်သော ဝေါဟာရ တစ်လုံးလည်းရှိပါသေးသည်။ဤဆောင်းပါးနှင့်အကျုံးဝင်ခြင်း
မရှိသည့်အတွက် မရှင်းပြတော့ပါ)ဂီ ´´အသံထွက် ဝေါဟာရသည် ဘင်္ဂါလီစာပေတွင်ရှေးဟောင်းကဗျာလင်္ကာ
သုံးတော်ဝင် စကားတစ်လုံးဖြစ်ပါသည်။အဓိပ္ဂါယ်မှာ ”သွား”(Go) ဟုအဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။ ယခုခေတ်”ယာ” နှင့်
တွဲ၍”သွားသည်”ဟူသော အဓိပ္ဂါယ်ကို ဂီယာဟုသုံးနှုန်းပါသည်။
”ဂျာ”ဟူသောဝေါဟာရသည် နေရာ အတည်တကျမရှိသော၊ခြေသလုံးအိမ်တိုင်၊အစုတ်၊အနုတ် အောက်တန်း
စား (Squatter) ဟု အဓိပ္ဂါယ်ရပါသည်။ထိုဝေါဟာရ သုံးလုံးအား ပြန်ကောက်လျှင်------
ရွင်(Roum) အရောင် (Colour)သည် ရခိုင်လူမျိုး ရခိုင်ဒေသ ကိုဆိုလိုသည်။
ဂီ သည် ရခိုင်ပြည်ကို သွားသောသူ။
ဂျာ သည် ဆင်းရဲသား အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့ လူ ။
ရွင် ဂီ ဂျာ = ရခိုင်ပြည်သို့ သွားသော အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့ လူဟု အဓိပ္ဂါယ်ရသည်။
ရွင် ဂီ ဂျာ မှ ရိုဟင်ဂျာ ဟူသော ဝေါဟာရ သုံးစွဲလာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ရိုဟင်ဂျာ သည် လူမျိုးနွယ်စု တစ်စု(Clan) အား ကိုယ်စားမပြုဘဲ၊ `` စစ်တကောင်းနယ်မှ ရခိုင်ဒေသသို့ သွား
သော ဆင်းရဲသား အိုးမဲ့အိမ်မဲ့များ ´´ ဟု အဓိပ္ဂါယ်ရသော (ဘမ်းစကား) တစ်လုံးသာ ဖြစ်ပါသည်။
ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများနှင့် စစ်တကောင်းသားကုလားများသည် စာပေအရေးအသားနှင့် စာပေအက္ခရာမှာအတူတူ
ပင် ဖြစ်ပြီး ပြောသည့်အခါ အသံအနိမ့်အမြင့် နှင့် လေယူလေသိမ်းကွာသည်မှ အပ ကျန်ထူးခြားမှုများ မရှိပါ။
ပင်ရင်း ဘာသာ စကားများသည် တူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။
ရှေးရှေးအခါက အိန္ဒိယတိုက်နယ်တွင် ယခုဘင်္ဂလားဒေရှ့် ဒေသသည်လည်း တစ်ခုအပါအ၀င် ဖြစ်ပါသည်။
ရခိုင်နှင့် နယ်စပ်ခြင်း ထိစပ်နေသော ဒေသဖြစ်ခဲ့၍ဘင်္ဂါလား (၁၂)မြို့သည်လည်း နှစ်ပေါင်း(၁၀၀) ကျော်ခန့်
ရခိုင်ဘုရင်များလက်အောက်တွင်နေထိုင်ခဲ့ရပါသည်။သမိုင်းကြောင်း ကို ဆွဲဆန့်ကြည့်ပါကလွန်ခဲ့သောနှစ်
ပေါင်းရာချီပြီး ရခိုင်လက်အောက်နေထိုင်ခဲ့ရသူများ ဖြစ်သည်။ထိုခေတ်ထိုအခါကယခုဘင်္ဂလားဒေရှ့်နယ်မြေ
သည်ရခိုင်လူမျိုးများ အိုးအ်ိမ် အတည်တကျနေထိုင်မှုများ ရှိပါသည်။
ရခိုင်ဘုရင်များ ထွန်းတောက်စဉ် ကာလ အတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် မြို့တော် မြောက်ဦးမြို့၌ နိုင်ငံခြားသားဟု
တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူများမှာ ဂျပန် ဆာမူရိုင်း စစ်သား အချို့၊ပေါ်တူဂီ စစ်သားအချို့၊နှင့်ကြေးစားအာရပ်
စစ်သားများ(ကမန်လူမျိုးများ= အမြောက်စစ်သားများ) အနည်းငယ်မှလွဲပြီး စစ်တကောင်းသား ကုလားများ မရှိပါ။ဒတ်(ခ်ျ)တို့၏ စီးပွားရေး'ဈေးကွက်'အတွင်းကျရောက်ခဲ့သောရခိုင်နှင့် မဂိုဘုရင်များသည်စီးပွားရေးအား
ပြိုင်ဆိုင် မှုရှိစဉ်ကာလကလည်း ဒေလီမှ မဂိုဘုရင်များနှင့်သာ ထိပ်တိုက်တွေ့ခဲ့ရသာ သမိုင်းမှတ်တမ်းများ
ရှိပါ သည်။ စစ်တကောင်းသားကုလားများအရေးပါမှုလုံးဝမရှိခဲ့ပါ။
သည် ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်။
ခရစ်နှစ်(၁၇၈၄)ခု ဘိုးတော်ဘုရားအရေးအခင်းတွင် ရခိုင်များဘင်္ဂါလားနယ်သို့ အလုံးအရင်းနှင့် ၀င်ရောက်
သွားခဲ့ ရာ ရခိုင်လူဦးရေ(၁)သိန်းကျော်(၂)သိန်းနီးပါး ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါသည်။ဘင်္ဂလားနယ်မြေသည်ရခိုင်
ပြည်၏ အနောက်ဘက် တွင်ရှိနေ၍ ထိုဒေသတွင်နေထိုင်လျှက်ရှိသော ရခိုင်သားများကိုလည်းအနောက်ပြည်
ရခိုင်များ ယခုတိုင်နေထိုင်လျှက်ရှိကြသော မြို့ရွှာများမှာ-
အ၀ကျွန်း၊ ဖလောင်းချိတ်၊ ပတ်တလီ၊ တောင်ရွှေရွာ၊ ဆယ်ကြီး၊ စုပ်ကရာ၊ရာမူ၊ပင်းဝါ၊ဟာလပင်း၊ မဟာစိုး၊ရွာ
သစ်၊ စိုင်းဒါး၊ စစ်တကောင်း၊ ကယုချောင်း၊ နတ်မြစ်ရွာ၊ မြစ်နားရွာ၊ခံပြင်၊ အောက်သားဘက်၊ဗိုလ်မင်းထောင်၊
သက်ထောင်၊ ဖလံထောင်၊ မြိုထောင်စသည်ရွာများဖြစ်သည်။
ရခိုင်ဘုရင် မင်းရာဇာကြီးသည်ဟံသာဝတီပဲခူးသို့ စစ်လာတိုက်ပြီး မင်းညီမင်းသားအများစုကို ဖမ်းခေါ်လာစဉ်
က လည်း ရခိုင်ဘုရင်ပိုင်နက်ဖြစ်သောဘင်္ဂါလားနယ်ဗိုလ်မင်းထောင်ဒေသကို နယ်မြေစားအဖြစ်ခန့်ထားခဲ့
သည်။နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်ခေတ်အရေး ပိုင်(D.C)များပင် လေးလေးစားစားနှင့် ဂါရ၀ပြု၍ လာရောက်လေ့ရှိပါ
ဗြိတိသျှအစိုးရသည် (၁၈၂၆)ခုနှစ်ချုပ်ဆိုသော ရန္တပိုစာချုပ်အရ မြန်မာနိုင်ငံကိုသိမ်းယူခဲ့သည့်နောက်ပိုင်းမှစ
၍ မြန် မာနိုင်ငံအတွင်းသို့လုပ်အားခဈေးပေါပေါနှင့်ရသောအိန္ဒိယတိုက်သား ကုလားများကိုအလုပ်သမား
အဖြစ် ခေါ်ယူအသုံးချခဲ့ကြ သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် အိန္ဒိယတိုက်မှ ကုလားများ အလုံးအရင်းနှင့် အတားအဆီးမရှိ ၀င်ရောက် လာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ရခိုင်ဒေသတွင် မိုးရာသီနှင့် ဆောင်းရာသီတွင် စပါးစိုက်ချိန်၊စပါးရိတ်သိမ်းချိန်များတွင်စစ်တကောင်းသား
ကုလားအများစု ၀င်ရောက်လာခဲ့ကြသည်။အလားတူပျဉ်းမနားဝန်းကျင်တွင် ကြံစိုက်ရန်အတွက်လည်း
ရခိုင်ဘက်တွင် စစ်တကောင်းသားကုလားအများစုဖြစ်ပြီး ပြည်မဘက်တွင်ဟိန္ဒူနှင့် ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများအများစု
ဗြိတိသျှကိုလိုနီခေတ် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်လာခဲ့ကြသောအိန္ဒိယတိုက်သားများနှင့် (၁၉၄၈)ခုနှစ်
မြန် မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရလာပြီးနောက်ပိုင်းဝင်ရောက်လာသောအုပ်စုကို နှစ်ကာလတစ်ခုစီကဏ္ဍခြား၍
လှုပ်ရှားမှုများကိုဖော် ပြပါမည်။ ဗြိတိသျှကိုလိုနီခေတ်က ၀င်ရောက်လာသောအိန္ဒိယတိုက်သားများသည်
(တရုတ်လူမျိုးအပါအ၀င်)မြန်မာနိုင်ငံ သားများနှင့် ဆိုးတူကောင်းဘက် အတူတကွ''နိုင်ငံရေးမပါ''မြန်မာနိုင်ငံ
မြန်မာလူမျိုး၏ အကျိုးကို သယ်ပိုး၍တိုင်းရင်းသားများ နှင့်ညီရင်းတမျှနေထိုင်ခဲ့ကြသည်ဟုကောက်ချက်ချ၍ ရပါသည်။(ဦးရာဇတ် အာဇာနည်ကုန်းရောက်နေသည်က သာဓကပြ လျှက်ရှိပါသည်။)
အလားတူ ယနေ့အထိ ဘင်္ဂါးဒေ့(ခ်ျ)တွင် နေထိုင်လျှက်ရှိကြသောရခိုင်သားများသည်လည်း ဘင်္ဂါလားဒေ့(ခ်ျ)
လူမျိုး များနှင့် ဆိုးတူကောင်းဘက် အတူတကွ လက်တွဲ၍ နေထိုင်လျှက်ရှိပါသည်။
သာဓကတစ်ခုကို ထုတ်ပြရလျှင် (၁၉၇၁)ခုနှစ် အနောက်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှ အရှေ့ပါကစ္စတန်(ဘင်္ဂလား
ဒေ့(ခ်ျ))ခွဲ ထွက်စဉ်အခါက ရှေ့တန်းမှပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့သော ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး(တပ်ချုပ်)ဦးကျော်ဦးသည်
ပင်းဝါမြို့သား၊ ရခိုင်လူမျိုး တစ်ဦးပင်ဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီ နောက်ဆုံးသတင်းအရဆိုလျှင် ဘင်္ဂါးဒေ့(ခ်ျ)
လူနည်းစုဝန်ကြီးဌာနတွင်ခန့်ထားသောအ မတ်တစ်ဦးမှာ ရခိုင်အမျိုးသားတစ်ဦးပင်ဖြစ်သည်ဟု သိရပါသည်။
ထို့ကြောင့် နိုင်ငံခြားသားလူမျိုးတစ်မျိုးကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးကိုထောက်၍ လူမျိုးမရွေး၊ဘာသာမရွေးလူသား
ချင်း စာနာထောက်ထားပြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကလက်ခံထားရစေကာမူအခွင့်အရေးပိုမတောင်းရန်၊ပိုမယူရန် အမိနိုင်ငံသားများစိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရန် ကျေးဇူးတရားကို ထောက်ထား၍ ဆင်ခြင်သင့်ပါသည်။
”အစ္စလာမ်ဘာသာ”ကိုရမ်ကျမ်း''တွင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တစ်ဦးသည် မည်သည့်နိုင်ငံ၊ မည်သည့်ဒေသ
တွင်မဆို နေထိုင်စေကာမူ ထိုနိုင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကိုရိုသေလေးစားလိုက်နာရမည်ဟု
လူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေး မိခင်နိုင်ငံမှအဝေးရောက်နိုင်ငံခြားသားတိုင်းလိုက်နာရမည့် 'နိုင်ငံတကာစံတစ်ခုဟု
ဆောင်းပါးပါအတွေးအခေါ်အယူအဆများမှာ စာရေးသူ၏အာဘော်သက်သက်သာဖြစ်ပါသည်။သဇင်ရနံ့ ၏
Posted by သဇင်ရနံ့at 19:33 No comments:
လူတို့ သည်သမိုင်းကိုရေးနေကြသည်။ သမိုင်းကတခါလူကိုပြန်ရေး၏။ သမိုင်းဆိုသည်မှာကာယကံ
ရှင်တို့ ကိုယ်တိုင်ရေးချင်တိုင်းရေးလို့မရ။မိမိတို့ ဘ၀တစ်လျှောက်ဆိုးကောင်းကျိုးကြောင်းလုပ်ခဲ့သ
မျှတို့ ကိုသမိုင်းကသူ့ ဖာသာသူ မှတ်တမ်းတင်သွားလိမ့်မည်။ ဒါကိုပင်သမိုင်းဟုနှောင်းလူတို့တန်ဖိုး
ထားလေးစားကြလိမ့်မည်။ယနေ့ ကျနော်တို့ အားလုံးတို့ သည်သမိုင်းထဲမှစာမျက်နှာများဖြစ်ကြ၏။
ကောင်းသောသမိုင်းစာမျက်နှာထဲတွင်ပါမည်လား၊သို့ မဟုတ်နှောင်းလူတို့ ကျော်ပြီးဖတ်သောသိပ်
ကဲ့သို့ စာမျက်နှာထဲတွင်ပါမည်လားဆိုသည်ကိုယနေ့ ကျနော်တို့ လုပ်နေသောအလုပ်ကသာသက်
ယနေ့ ရခိုင်နိုင်ငံရေးလောကတွင်အဖြစ်အပျက်တို့ အလွန်လျှင်မြန်စွာ ဖြစ်ပေါ်နေကြသည်။ဖြစ်ပေါ်
ဘက်ကိုဦးတည်ဖို့ တော့သိပ်မမြင်။တောင်ကျချောင်း အချိန်အဟုန်ပြင်းပြင်းမှကျဆင်းလာသောဝါး
ဖေါင်မခိုင်ပဲပြိုဆင်းးပြီးတစစီ တစ်လုံးစီပြန့် ကြဲနေကြသကဲ့သို့ ဖြစ်နေသောရခိုင့်နိုင်ငံရေးအ၀န်းအ
၀ိုင်းတွင်ဘယ်သူကဘယ်သူကိုဘယ်ဘယ်တုန်းကအငြိုးဖြင့် နာကျဉ်းနေသည်ကိုတော့မသိ။ အခဲ
မကျေနိုင်သောရန်ပွဲဖြင့်အပြန်အလှန်ဆော်နေကြသည်မှာသွေးညှီပင်နံသည်။ ရန်သူကဘာမှ လုပ်စ
ရာမလို၊မိမိတို့ အချင်းချင်းတိုက်သည်၊ပြီးမိမိတို့ အချင်းချင်းသတ်ကြသည်၊မိမိတို့ အချင်းချင်းအပုတ်
ဘင်တို့တည်ထောင်ကိုးကွယ်လာကြသောဘာသာ၊သာသနာကို လူမျိုးခြားဘာသာခြားတို့ ဝါးမျိုစား
တို့ ရန်ပွဲရပ်ရမှန်းမသိကြသေး။ဒီလိုရခိုင်သားတို့ သတ္တိပြောင်ကြသည်။
တချို့ တော့တစ်မျိုး။သူတို့ ကဒီလိုအကြောင်းပြကြသည်။ အကယ်၍ကုလားကိစ္စကိုဝင်ပြောလျှင်စစ်
ကိုလည်းတခါပြောင်းပြန်မြင်ပြီးသူတို့ နှင့်အတူယောက္ခ-မနွားအငှားမကျောင်းရကောင်းလား ဆိုပြီး
အပြစ်တင်ချင်ကြသည်။ဒီလိုတော်ခဲ့ကြလို့ လည်း၁၉၄၈ခုလွတ်လပ်ရေးရတော့ရှမ်းတို့ ၊ချင်းတို့ကပင်
ကင်းဖြင့်အတူပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သော၊ကိုယ့်ခြံကိုယ့်ပစ္စည်းကို ကိုယ့်ရခိုင်သားတို့ ကာကွယ်ဖို့ 
ရည်ရွယ်ပြီးအများပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်သောအဖွဲ့ တစ်ခုကိုသူတို့ တည်ထောင်လိုက်ကြ၏။ယနေ့ကျနော်
တို့အားလုံးသိနေကြသောနိုင်ငံတကာရခိုင်အမျိုးသား အသင်းကြီးဖြစ်သည်။ ဤအသင်းကြီးသည်
ခေတ်အခြေအနေအချိန်အခါအရရခိုင်ပြည်သူတို့အတွက်လိုအပ်ချက်အရပေါ် ထွက်လာသောအဖွဲ့့
ဤအဖွဲ့ ကြီးကိုကျနော်တို့ အားလုံးဝိုင်းရံကြဖို့ လိုပါသည်။ ၀ိုင်းဝန်းပြုစုပျိုးထောင်ကြဖို့ လိုပါသည်။
အကြုံရှိသူ ဆိုသူတွေကလည်းသူတို့ ခိုင်းတာမလုပ်ယင်ပဲနိုင်ငံရေးကိုနားမလည်သူစသည်ဖြင့်စွတ်စွဲ
သင်းကြီးအတွက်တပြားတချပ်ထည့်ဝင်သလားဟုဆိုလျှင်တခါမှစိတ်ကူးပင်ပေါ်ကြပုံမကျ။ သို့ သော်
တစ်ယောက်အနေဖြင့်ဘာမှပြောစရာမရှိပါ။ အခုသူတို့အနေအထားကကောင်းရာ ကောင်းကြောင်း
တွေ့ ရတော့အသင်းကြီးကိုမပျက်ပျက်အောင်ဖျက်နေကြသလားဟုပင် ကျနော်သူတို့ ကိုသံသယ၀င်
အရေးတော်ပုံနှင့်အတူပေါ်လာသည်မဟုတ်ပါ။နှစ်ပေါင်းနှစ်ရာကျော်သူ့ကျွန်ဘ၀ကလွတ်မြောက်
ကို လိုက်သွားနေကြရင်တော့ သူများတွေကလိုရာခရီးရောက်လို့ ပျော်နေကြချိန်မှာ ကျနော်တို့တွေ
မျိုးသား အင်အားစုကြီးတစ်ရပ်ကိုဖန်တီးနိုင်မည့်နည်းလမ်းသည်ထိုပယောဂ များမပါသောလူထုလူ
ပါမည်။တချို့ ကလူမှုရေးအဖွဲ့ မို့လို့တို့နင့်မဆိုင်ဟုဆိုကြပြန်သည်။
ကျနော်နားမလည်။ကျနော်နားလည်တာတစ်ခုက ရခိုင်လူမျိုးတွေအတွက် ဘယ်ရခိုင်တစ်ယောက်
တို့ ဘက်ကမကူညီသည့်အပြင်ထိုစစ်တကောင်းသားတို့ ကိုပင်မြှောက်ပေးလိုက်ကြပါသေးသည်။
များ၊ရှေ့ မီနောက်မီဆိုသူများဘယ်တစ်ယောက်ကမှ ထိုကုလားများလိမ်နေသည်ကို ပြောင်ပြောင်
မှာစိုးလို့ ၊အင်ဂျီအိုထောက်ခံမှုလျော့သွားမာစိုးလို့ စသည်ဖြင့်စိုးရိမ်နေကြပြီးဘာသာသာသနာကွယ်
ထိုသို့ဆိုလိုက်သဖြင့်ကျနော့အားလူမျိုးရေးအမြင် ကျဉ်းသူဟုပြောကြလျှင်ကျနော်ဆယ်ခါပြန်ကျဉ်း
တို့ လူမျိုးရေးအမြင်ကျဉ်းခဲ့လို့ သာယနေ့ မြန်မာပြည်၏မြေပုံဒီအတိုင်းရှိနေကြခြင်းဖြစ်သည်။သူသာ
ကြဖို့အများကြီးလိုအပ်ပါသည်။ ဆိုတော့ကျနော်တို့ရခိုင်လူမျိုးခေါင်းဆောင်ကြီးများကိုလူမျိုးရေးအ
ကောင်းပြီယနေ့နိုင်ငံတကာရခိုင်အမျိုးသားအသင်းကြီးကိုလူမှုရေးအဖွဲ့ ကနေနိုင်ငံရေးအဖွဲ့ အသွင်
ဆိုလျှင်အဖွဲ့ အစည်းချင်းမတူယင်လဲပြသနာမရှိ။ မိမိတို့အချင်းချင်းတူသည်ကိုတွဲလုပ်၊မတူသည်အ
ကြာလေဝေးလေဖြစ်ကြရပါတော့မည်။တိုင်းပြည်အတွက် လူမျိုးအတွက်ဥာဏ်စွမ်း ဥာဏ်စရှိသ
နှင့်ဟုသာအဖွဲ့ ကြီးကိုယ်စားမေတ္တာရပ်လိုပါသည်။အချုပ်အားဖြင့်ပြောရလျှင် ယနေ့ဒဘလျူအေအို
အဖွဲ့ ကြီးသည်သမိုင်းလိုအပ်ချက်အရ၊ရခိုင်ပြည်သူတို့ ၏လက်ရှိအခြေအနေ၏တောင်းဆိုမှုအရပေါ်
နောင်လာနောင်သားတို့အားထားရာအရိပ်ခိုရာ အေးချမ်းသည့်ဘူမိနက်သန်မြေတစ်ခုကိုကျနော်တို့ 
ထားခဲ့နိုင်ပါမည်။မဟုတ်လျှင်တော့နေပူကျဲကျဲ ကန္တာရထဲမှာကျနော်တို့ တေရဲ့ မျိုးဆက်တွေဒုက္ခပင်
WAO -အဖွဲ့ ဝင်တစ်ဦး
Posted by သဇင်ရနံ့at 10:59 No comments:
တရုတ်နိုင်ငံ၊ကွမ်တုံပြည်နယ်မှ အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် တရုတ်အမျိုးသမီးလေးတစ်ဦးသ
ည် ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှစတင်ပြီး ဈေးပေါသော ပုလဲပေါင်ဒါ တစ်မျိုးအား လိမ်းခြယ်အသုံးပြုခဲ့ေ
သာကြောင့် အသက် ၆၀ အရွယ်ခန့်အမျိုးသမီးကြီး၏မျက်နှာပုံစံသို့ အိုမင်းသွားခဲ့ရကြေ
ပြီး တစ်နှစ်အတွင်းမှာပဲခုလို အရည်တွန့် တာတွေဖြစ်လာပြီးဇရာအသွင်ဖြစ်လာခဲရပါတ-
သူမဟာ ဒီရောဂါရခဲ့လို့ ရှက်စိတ်ကြောင့် ကောလိပ်ကျောင်းကနေထွက်ခဲ့ရပေမယ့်စိတ်ဓ
မကျပဲ ရောဂါနှင့်ဆက်နွယ်တဲ့နယ်ပယ်တွေမာအလုပ်ရဖို့ မျှော်လင့်လျှက်ရှိတယ်လို့ သိရ
စုရင်ဖြစ်ပွားတဲ Acquired Anetoderma ရောဂါဟာနှစ် ၂၀ အတွင်း ၁၀ ဦးသာဖြစ်ပွားပြီး
တရုတ်နိုင်ငံကဖြစ်ပွားသူ ၃ ဦးအနက်ပထမဆုံးအမျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်။
Weekly Eleven News ဂျာနယ်မှ
Posted by သဇင်ရနံ့at 23:49 No comments:
အခွင့်အလမ်းဆိုတာ ရှာတတ်ဖို့ လိုတယ်
မနေ့ က ၁၁.၀၈.၀၉ နေ့ က နော်ဝေ နိုင်ငံဘာဂင်တက္ကသိုလ်ရဲ့ မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆို
ပွဲကို လုပ်ပါတယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ နိုင်ငံပေါင်းစုံကလာရောက်ကြတာကိုတွေ့ 
လိုက်ရပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်း ၆၀ ကျော်က နိုင်ငံတကာကျောင်းသား၊ကျောင်းသူပေါင်း ၅၀၀
ကျော်ဒီနှစ် ၂၀၀၉၊၂၀၁၀ ပညာသင်နှစ်အတွက်ရောက်နေကြပြီလို့ ဆိုပါတယ်။
ကျနော်တို့ အာရှက ပုံသဏ္ဍာန်၊ရုပ်ရည် အသားအရောင်တွေ တွေ့ တော့မြန်မာပြည်ကလ
ားလို့ မေးမိတယ်။မဟုတ်ပါဘူး။လို့ ပဲအဖြေရတာများတယ်။မြန်မာပြည်ကလဲ ရှိတော့ရှိကြ
မှာပါ။ကျနော်နင့်ပဲမတွေ့ မိလို့ များလား။
မ်းတွေကိုမသိကြလို့ လား။အရည်အချင်းမမီလို့ မရောက်ဖြစ်တာလို့ တော့ကျနော်မထင်မိ
ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျနော်တွေ့ ဖူးတဲ့မြန်မာပြည်က ကျောင်းသားလူငယ်တွေ
အများစုဟာ ဘာသာစကားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊အခြားဆေးပညာရပ်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် မညံ့ကြတာ
သူတို့ ဘယ်လို ဆက်သွယ်ပြီးလာရမယ်ဆိုတာကိုမသိသေးကြလို့လို့ ပဲယူဆမိပါတယ်။
တကယ်တော့ ဘာဂင်တက္ကသိုလ်အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာမှာ ပညာရေးကိုဖြန့် ဝေဖို့ နှစ်စဉ်
ကမ္ဘာတ၀ှမ်းက ကျောင်းသားတွေကိုအများကြီးခေါ်ပါတယ်။ကနေဒါ ကျောင်းသူတစ်ယော
တွေကိုအရူးလိုသုံးတယ်တဲ့။ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်လို့ လုံးဝနမျောတွန့် တိုတာမရှိပဲရက်ရ
က် ရောရောသုံးစွဲတာကိုသူကိုယ်တိုင်သိရလို့ အခုလိုမှတ်ချက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုနေရာမျိုးကို ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်က ကျောင်းသားလူငယ်တွေကိုလည်းလာပြီးပညာ
ဘာဂင်တက္ကသိုလ်မှာလာရောက်ကျောင်းတက်ဖို့ ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေ၊ဘယ်လို အရည်
Posted by သဇင်ရနံ့at 17:24 No comments:
မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာကြောင့် ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံထားရသည့် ဂျပန် အဆိုတော်၊သရုပ်ဆောင် နိုရီဆခိ တိမ်းရှောင်
မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာကြောင့် ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံထားရသည့် ဂျပန်အဆိုတော်၊သရုပ်ဆေ
မင်းသမီးနိုရီကိုအား ပြီးခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်အစောပိုင်းက ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြန်ထားခဲ့ခြင်း
ဖြစ်ပြီး အဆိုပါဖမ်းဝရမ်းကို သူမ၏ခင်ပွန်းဖြစ်သူ တာကာဆိုအားမူးယစ်ဆေးဝါးလက်ဝယ် တွေရှိမှုဖြင့်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့အပြီးအတွင်ထုတ်ပြန်ခဲခြင်းဖြစ်ပါသည်။နိုရီကို၏ခင်ပွန်းဖြစ်သူတာ
ရဲတပ်ဖွဲ့ က သြဂုတ်လ ၃ ရက်နေ့ တွင် ရှာဖွေတွေ့ ရှိခဲ့ပြီးနောက် ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
စစ်ဆေးမှုများအရ တာကာဆို ၏မူးယစ်ဆေးဝါးသယ်ဆောင်လာမှုတွင် ဇနီးဖြစ်သူနိုရီကို
လည်း ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ဟု ယူဆပြီး ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
သူမ၏ အေးဂျင့်ဖြစ်သူကမူယခုဖြစ်စဉ်တွင် နိုရီကို၌ တာဝန်မရှိကြောင်းနှင့်အစီရင်ခံစာလွဲ
ချော်မှုကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပြီး မင်းသမီးနိုရီကိုအနေဖြင့်
ခုနှစ်တွင် ရုပ်သံဇာတ်လမ်းများ၌ ပါဝင်ခဲ့ပြီး၁၉၉၀ပြည့်နှစ်များတွင်ကျော်ကြားလာခဲ့သူဖြစ်
Weekly Eleven News Journal မှ
Posted by သဇင်ရနံ့at 17:15 No comments:
စိတ္တဇ ဆေးရုံ တစ်ခုမှာ ဆရာဝန်တွေဟာ ပြန်ကောင်းလာတဲ့ လူနာတွေကို ပြန်လွတ်ပေး
ဖို့ စဉ်းစာကြပါတယ်။အဲဒီမှာသူတို့ ဟာ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုလုပ်ကြပါတယ်။Videoပြစက်ရှေ့ 
မှာ ရှိတဲ့ထိုင်ခုံတွေကိုဆေးသုတ် ပြီးတော့သူတိုကိုVideo ပြပါတယ်။ဘယ်သူကများဆေး
သုတ်တာကို သိမလဲ လို စမ်းသပ်ပါတယ်။ဘယ်သူမှမသိကြပါဘူး။ဒါပေမယ့်လူတစ်ယော
က်ကတော့ ထိုင်ခုံတွေကို သေသေချာချာ ကြည့်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သတင်းစာတစ်စောင်
ကို ထိုင်ခုံမှာဖြန့် ခင်းပြီးမှထိုင်တယ်။ဆရာဝန်တွေကဒီလူတော့ရောဂါပျောက်သွားပြီဆိုပြီး
အိမ်ကို ပြန်လွှတ်လိုက်ပါတယ်။ အိမ်ရောက်တော့ သူမိန်းမ ကမေးတယ်။
"ဘာတွေလာပြောနေတာလဲ။ငါကအရပ်ပုလို့ထိုင်ခုံမှာသတင်းစာခုပြီးထိုင်တာဟ..."
စိတ္တဇ ဆေးရုံတစ်ခုတွင်ဖြစ်သည်။လူနာတစ်ယောက်သည် သစ်ပင် ပေါ်တွင်ရောက်နေသ
"ဟေ့ကောင်.......မင်းဆင်းမှာလား..မဆင်းဘူးလား..ငါ ပစ်လိုက်မှာနော်.."
ဆရာဝန်လဲ ကြံရာမရ ဖြစ်နေတယ်။အဲဒီ အချိန်မှာ နောက်လူနာတစ်ယောက်ရောက်လာ
ပါတယ်။ဆရာဝန်ကအဲဒီလူနာဆီ ကနေအကူအညီတောင်းပါတယ်။လူနာ ကသေနတ်ကို
"ဟုတ်...ဟုတ်..ဆင်းလာပါပြီ. ..မပစ်ပါနဲ့ ...ဆင်းပါပြီ.."
"မင်းက ငါပြောတုံးကတော့ မဆင်းဘူး...ဘာလိုသူပြောမှဆ င်းတာလဲ.."
"ကျွန်မ ဆရာပေးတဲ့ ပိန်ဆေးကို သောက်နေတာ ၂- လရှိပြီ၊ ပိန်လည်းမပိန်ပါလားရှင်"
"တစ်နေ့ကို ခင်ဗျား ဘယ်နှစ်ကြိမ်သောက်သလဲ"
"ဆယ်ကြိမ်၊ ထမင်းစားပြီးတိုင်း တစ်ခါသောက်လို့ ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းပဲလေ"
မှလွှတ်သောမမိုမိုကိုယောင်္ကျားဖြစ်သူကိုလှထွန်းမှလိုက်ပို့ ရင်းနှုတ်ဆက်စဉ်..... ..
ကိုလှထွန်း.."စိတ်ချပါကွာဒါနဲ့ မင်းပြန်လာရင်အင်္ဂလန်ကဘိုမတစ်ယောက်လောက်သယ်
ခဲ့ဟေ့...အဖြူမလေးတွေအရမ်းမိုက်တယ်လို့ ပြောသံကြားဖူးတယ်.ဟားဟားဟား....."
မမိုမိုမှာ လွန်စွာအစအနောက်သန်သော ယောင်္ကျားဖြစ်သူကိုလှထွန်း အားမျက်စောင်းထိုး
ကြည့်ရင်းလေယျာဉ် ပျံဆီသို့ ထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။
၅လခန့် အကြာ မမိုမိုအထုပ်အပိုးလက်ဆောင်များနှင့်ပြန်လာစဉ်မင်္ဂလာဒုံလေယျာဉ်ကွင်း
ငါကတော့ပိုပြီးသတိရတာပေါ့ကွာ..ဟီးဟီး...ဒါနဲ့ ငါမှာလိုက်တဲ့ ဘိုမလေးရော...."
မမိုမို."အင်း ..ဘိုထီးလေးပဲဖြစ်မလား၊ဘိုမလေးပဲဖြစ်မလားတော့မသိဘူး။ကျွန်မလဲတွေ့ 
"ဒါနဲ့ နေပါအုန်း..နေပါအုန်း. .."
"ဘာကွ!သူရာမေရကံ ကျူးလွန်ပြီး အခြားကံ ၄ ပါးပါ ချိူးဖောက် တာ မဟုတ်ဘူးလား"
"ဘယ့်နယ် ချုိုးဖောက်ရမှာလဲဗျာ.. အေ့။တကယ်သောက်ကြည့်ပါလား။အရက်မူးလွန်လို့ 
သူများကိုလိမ်ဖို.မပြောနဲ့ ကိုယ့်ရှာအလုံးကြီးကိုပြန်မကိုက်မိအောင်လို့ မနဲထိန်းထားရတ
"မအေ့နဲ. တချို.ဆို အမူးလွန်းပြီး အမှန်တိုင် ပြောမိလို့ ကျွဲခိုးပေါ်တာရှိသေး..အေ့။"
"မ အဲ့ နဲ့ အုန်းရှိသေးတယ်..သူတပါးပိုက်ဆံခိုးဖို့ မပြောနဲ့ ကိုယ့်အိတ်ထဲ ပိုက်ဆံတောင်ဘ
ယ်ကောင် နှိက်သွားမှန်း မသိလို့ ပျောက်ရတာအကြိမ်ကြိမ်...အေ့ ။"
"မဟင်နဲ.အုန်း..ကျန်သေးတယ်။သူတ ပါးအသက်သက်ဖို့ မပြောနဲ့ ကိုယ်ဘာသာကိုမရပ်
နိုင်လို. ဓာတ်တိုင် ဖတ်ထားရတာဘဲ ကြည်. တော့...အေ့..။"
"မသြော်နဲ.မပြီးသေးဘူးသူများသားမယားကိုပြစ်မှားဖို့ ဆိုဝေးရောနိုင်ငံခြားမှာဖြစ်ဖူးတယ်...အမူးလွန်ပြီး ပန်းခြံထဲမှာ အိပ်နေတာ ကိုယ့်ဖင်ထဲကိုမြွေဝင်သွားမှန်း တောင်မသိဘူး...အေ့..။"
"မင်ပြောတော့လည်း ဟုတ်သလိုဘဲ။ငါလည်း ကံ၎ပါး လုံအောင်အရက်သောက်ရမလိုဖြစ်
နေပြီ အရက်ဆိုင် သွားအုံးမှ.....။ တစ်ချက် ရီရင် တစ်ချက်ပျော်နိင်ပါစေ။
*မဆုတ်သာ မတိုးသာ အခြေအနေ*
"ငါ့တို့ နိုင်ငံ့ခြားကိုတစ်ပတ်ကြာသွားရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့် စီစဉ်စရာရှိတာတွေစီစဉ်ထား။"
အတွင်းရေးမှူးမက သူ့ယောင်္ကျားထံ ဖုန်းဆက်၏။
"ကျွန်မ သူဌေးနဲ့ ကျွန်မနိုင်ငံခြားကိုတစ်ပတ်ကြာသွားရလိမ့်မယ်။ ရှင်ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်
ယောကျာင်္းက သူ့တိတ်တိတ်ပုန်း ချစ်သူထံဖုန်းခေါ်သည်။
"ကိုယ့်မိန်းမ နိုင်ငံခြားကို တစ်ပတ်ကြာသွားရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်တို့ တစ်ပတ်လုံးအ
တိတ်တိတ်ပုန်းချစ်သူကသူမသီးသန့်ကျူရှင်ပေးနေသော ကောင်လေးထံဖုန်းဆက်သည်။ "ငါတစ်ပတ်လောက်အလုပ်လုပ်စရာရှိတယ်။ ဒါကြောင့် မင်းစာလာသင်စရာမလိုဘူး" ကောင်လေးကသူ့အဘိုးထံဖုန်းဆက်သည်။
"ဘိုးဘိုး၊ ကျွန်တော့်ဆရာမ အလုပ်များနေလို့တစ်ပတ်လောက် စာမသင်ရဘူး။ကျွန်တော်
"ဒီအပတ်ငါမြေးနဲ့အချိန်ဖြုန်းရမယ်။ အဲဒီ အစည်းအဝေးကိုမတက်နိုင်တော့ဘူး။"
အတွင်းရေမှူးက သူ့ယောင်္ကျားကို ဖုန်းခေါ်သည်။
"ငါတို့ ဒီတစ်ပတ် အတူတူအချိန်မဖြုန်းနိုင်တော့ဘူး ။ငါ့မိန်းမခရီးစဉ် ဖျက်လိုက်တယ်။"
တိတ်တိတ်ပုန်းချစ်သူက ကျူရှင်သင်ပေးနေသည့် ကောင်လေးထံ ဖုန်းခေါ်သည်။
"ဒီတစ်ပတ် ငါတို့ ပုံမှန်အတိုင်းစာသင်ဖို့ရှိတယ်။"
"ဘိုးဘိုး ကျွန်တော့်ဆရာမက ပြောတယ်။ကျူရှင်တက်ရမယ်တဲ့အဘိုးနဲ့ အဖော်မလူပ်ပေး
အဘိုး (အလုပ်ရှင်)က သူ့အတွင်းရေးမှူးထံ ဖုန်းဆက်သည်။
"ဘာမှ မစိုးရိမ်နဲ့။အဲဒီအစည်းအဝေးကို ဒီတစ်ပတ်ဒို့တက်ရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်စီစဉ်စရာရှိ
အဲဒါကို မဆုတ်သာမတိုးသာ အခြေအနေဟု ခေါ်သည်။
*ဗိုက်ဆာ လို့ ပါ*
အရာရာကို စူးစန်းချင်သော တတိယနှစ် ဆေးကျောင်းသူတယောက်သည်သူမ၏ ပထမ
ဆုံးသောလက်တွေ့ သင်ကြားရက်တွင် ခွဲစိတ်ခန်းသို့ စပ်စပ်စုစုသွားကြည့် ပါသတဲ။ခွဲစိတ်
ကုသမှုခံယူရန် လူနာတယောက်သည် ခွဲစိတ်ခန်းအ၀ ၀င်ခါနီးတွင် သူ၏အလှည့်ကိုစောင့်
ဆိုင်းနေပါ သည်။ထိုလူနာသည်အဲဒီ ဆေးကျောင်းသူကိုလည်းမြင်ရော.....
“ဆရာမဗိုက်အရမ်းဆာနေပြီ။အခုထိခွဲခန်းလည်း မ၀င်ရ သေးဘူး။ဆရာမရယ်ကူညီပါဦး။“
အဲဒီဆေးကျောင်းသူကလည်းပထမဦးဆုံးဆရာမ အခေါ်ခံရတာရယ် ထိုလူနာကိုကြည့်ပြီး
သနားတာရယ်။ အ၇ည်ဆို၇င်တော့ သိပိပြသနာတော့မရှိ လောက်ပါဘူးဟုစဉ်းစားပြီး ..
လို့ ကုန်ခါနီး ရောထိုလူနာကိုစမ်းသပ်ရန် ရောက်လာသောခွဲခန်းတာဝန်ကျဆရာဝန်လဲအ
အေး သောက် နေတဲ့လူနာကိုမြင်ပါလေရော။တာဝန်ကျဆရာဝန်သည်လူနာအားခွဲစိတ်ကု
သမှု ခံယူ ၇မည့်လူနာများသည် ည ၁၀ နာရီမှစ၍မည်သည့်အစားအသောက်မှစားခွင့်မပြု
ပါ။ေ၇ ပင်သောက်ခွင့် မပြု ပါဆိုကိုသေချာစွာရှင်းပြပါသည်။ထို့နောက်ခွဲစိတ်ရက်ကိုရက်
ရွေ့ လိုက်ရ ပါ သည်။တာဝန်ကျဆရာဝန် ကဆေးကျောင်းသူအား အအေးတိုက်ရသည့် 
အကြောင်း အားမေးမြန်းသည့်အခါဆေးကျောင်း သူက ” လူနာ ဗိုက်ဆာလို့ ပါ “ ..... တဲ့
*(ရ) ရက်သောက်ရမည့် အတူတူ*
တနေ့ သောအခါ အလုပ်သင်ဆရာဝန်မလေး နှင့် သူ၏ သူ ငယ် ချင်း များသည်ဆေးရုံနှင့်
ဝေး သော ကျေးလက်ဒေသ သို့ ရန် (၂) ပတ် ကြာမျှ ကျမ်းမာရေး ကွင်းဆင်းလေ့လာရန်
နည်းပါး၍ ရိုးသားကြသည် ။လုပ်သင်ဆရာဝန်မလေး သည် လယ်ထဲတွင် အလုပ်လုပ်ရင်း
ဆေး (Antibiotic) ဆေးသောက်၇န်လိုကြောင်း၊ ဆေးကို တနေ့ သုံးကြိမ်၊(၈)နာရီခြား၊အ
စားအစာ နှင့်ဝေးဝေး သောက်ရမည် (၇) ရက်ဆက် တိုက်သောက်ရ မည်ဆိုသည်ကိုသေ
ည့် အကြာင်း၊ မမှတ်တတ်ကြောင်း၊ဆေးသောက် ရန်လည်းပြင်းသည့် အကြောင်းပြန်ပြော
ပါသည်။ထိုအခါ အလုပ်သင်ဆရာဝန်မလေး လူနာသေချာနားမလည်ပုံပေါက်သဖြင့် ထပ်
၍ မနက် (၈) နာရီ၊နေ့ လည် (၂)နာရီ၊ ည(၁၀) နာ၇ီ သောက်ရန်ပြော၍ ဆေး(၂၁)လုံးကို
ပေးလိုက် ပါသည်။နောက် (၂) ရက်အကြာတွင်ပြန်ပြ၇န်မှာလိုက်ပါ သည်။
နောက် (၂) ရက်အကြာ - အလုပ်သင်ဆရာဝန်မလေး ကစိတ်မချ၍ ဆေးဘယ်နှလုံးကျန်
ပါသေးသလဲဟုမေး လိုက်ရာလူနာပြန်ပြောလိုက်သည်မှာ - အိမ်ရောက်တာနှင့်(ရ) ရက်ေ
သာက်ရမည့် အတူတူဆေးအားလုံးတခါထဲ သောက်လိုက်သည်ဟု ....
"အန်ကယ်။အန်ကယ်သမီးနဲ့ကျတော် လက်ထပ်တာသုံးလပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ အခုက
လေးမွေးပီ အဲဒါဘယ်လိုဖြစ် နိုင်မှာလဲကလေးတယောက်မွေး ဘို့ဆိုတာ ၉ လကြာတယ်
ဤစကားကိုကြားသောအခါ ယောက်ခမ ကပြန်မေးသည်။
"မင်းက မင်းမိန်းမနဲ့ သုံးလကြာ အတူနေတယ်နော်"
"မင်းမိန်းမက မင်းနဲ့ သုံးလ ကြာနေတယ်"
"မင်းတို့နှစ်ယောက် အတူနေတာ အခုဆို သုံးလ ရှိပြီ မှန်တယ်နော်"
"ဒါဆိုရင် ၃+၃+၃ ဆို ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ"
"အေး အဲဒါပဲငါ့ကိုနောက်လာပီး အနောက်အရှက် မပေးနဲ့"
ရပ်ကွက်ထဲတွင် လူငယ်များစုဝေးကာ ကိုယ်ခံပညာများလေ့ကျင့်နေသ ည်ကို တောမှအ
လည်လာသောဦးလေးကြီးက ကြည့်ပြီး..သူ့တူမဖြစ်သူအား...
“ တူမကြီးတို့ ရပ်ကွက်ကလူငယ်တွေကboxing ကျင့်တဲ့သူကျင့်တုတ်သိုင်း၊ဓါးသိုင်းကျင့်
တဲ့သူကျင့်နဲ့ နိုင်ငံ့အတွက်အားရစရာပဲဟေ့။ဒါနဲ့ ဘာအတွက်ကျင့်နေကြတာလဲအာရှပြိုင်
“ မဟုတ်ဘူး ဦးလေးရဲ့...ရပ်ကွက်ပေါင်း စုံ ဘောလုံးပွဲတွေ စတော့မှာလေ...”
ဆို ရင်ခုတင်အောက်ဝင်ပုန်းတော့တာပဲ.... ။.”
“ သူ့ခမျာ ကြောက်လို့ဖြစ်မှာပေါ့....၀င်ပု န်းပစေပေါ့....”
“ ကုတင်အောက်မှာ ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ဆို ကျပ်တယ်ဗျ"
Posted by သဇင်ရနံ့at 14:15 No comments:
တရုတ်ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်ပါ။သူငယ် ချင်းတို့ကြားဖူးပြီးသားလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပါ။တခါက လူနှစ်ယောက်ဟာတောထဲမှာမျက်စိလည် လမ်းမှားပြီးလမ်းပျောက်နေပါတယ်။ဒါကိုသစ်
ည်း သစ်ခုတ်သမားကိုမသတ်ဖို့ဒူးထောက်တောင်းပန်တာပေါ့။ဒါနဲ့ သစ်ခုတ်သမားလည်း
နေတာ ၉လုံးမြောက်လည်းရောက်ရော အားပါးတရရယ်လိုက်လို့သတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။
"မင်းကွာ၊နောက်နှစ်လုံးသည်းခံလိုက် ရင် မင်းသေစရာမလိုတော့ဘူး၊ဘာကြောင့်ရယ်ရ
တာလဲ"လို့မေးတော့ ပထမလူက အရယ်ကိုမရပ်နိုင်သေးဘဲ
လေယာဉ်မယ်။ ။"ကျေးဇူးပြုပြီး နားဆင်ကြပါရှင်။"
ခရီးသည်များ အားလုံးတိတ်ဆိတ်သွားပြီး လေယာဉ်မယ်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်သည်။
လေယာဉ်မယ် "၀မ်းသာစရာ သတင်းနှစ်ခု နဲ့ ၀မ်းနည်းစရာ စကားလေးတစ်ခွန်းလောက်
လေယာဉ်မယ်... "၀မ်းသာစရာ စကားကတော့ ပထမအချက်အနေနဲ့အခုခရီးစဉ်လေယာ
ဉ်ခများကိုအခမဲ့စီးနင်းခွင့်ပြုမှာမို့ငွေများပြန်လည်ထုတ်ပေးဖို့ ပါပဲ။"
ခရီးသည်များ.... ဟေး... ဟုအော်ကာ ၀မ်းသာသွားကြသည်။
လေယာဉ်မယ်..."နောက်ထပ် ၀မ်းသာစရာ တချက်ကတော့ ခရီးသည်တစ်ဦးကိုဒေါ်လာ
ငွေ ၅၀၀၀စီအပိုထပ်ဆောင်း ပေးအပ်သွားမယ်ဆိုတာပါပဲ။"
ခရီးသည်များ.... ဟေး... ဟုအော်လိုက်ကြပြန်သည်။
လေယာဉ်မယ်..." ၀မ်းနည်းစရာတစ်ခုကတော့ကျွန်မတို့ လေယာဉ်စက်ချွတ်ယွင်းပြီးမြေ
ပြင်ကို ထိုးကျနေပြီဆိုတဲ့ စကားပါပဲ။အားလုံကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်"
ဗေဒင်ဆရာ။ ။"ခင်ဗျားမှာ ကလေးသုံးယောက်ရှိရမယ်။"
ဗေဒင်ဆရာ။ ။"ဘာလဲ ခင်ဗျားက သူတို့အားလုံးရဲ့ ဖခင်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်နေတယ်ေ
Posted by သဇင်ရနံ့at 13:59 No comments:
ရွာတစ်ရွာမှာ ဦးသာဒွန်းနဲ့ ဒေါ်ပုဆိုတဲ့သူဌေးလင်မယားနှစ်ယောက်ရှိတယ်။ဒါပေမယ့်လူ
တွေအားလုံးကသူဌေးကြီး ဦးသာဒွန်းလို့ မခေါ်ကြပဲသူဌေးမကြီး ဒေါ်ပုရဲ့ယောကျာင်္းဆို ပြီး
ခေါ်ကြတယ်။ ဒီအခါမှာ ဦးသာဒွန်းက စိတ်ထဲမှာမကျေနပ်ပါဘူး။စီးပွားရေးတွေကျတော့
မကြီး ဒေါ်ပုနှင့် ခင်ပွန်း ဆိုပြီးဖိတ်တော့ဦးသာဒွန်းရဲ့နာမည်ကတစ်ခါမှကိုမပါပါဘူး။ဦးသာ
တစ်နေ့တော့ အလှူတစ်ခု သွားဖို့ကြုံလာတဲ့အခါသူနာမည်ကြီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အ
က်လာတဲ့အချိ န်မှာ ဦးသာဒွန်းစိတ်ထဲမှာတွေးနေတာကသူ့ကိုဒီပုံအတိုင်းသာလူတွေမြင်
ရင်သူဌေးကြီးဦးသာဒွန်းမြင်ဖြူကြီးစီးပြီးလာတယ်လို့ လူတွေကပြောမှာပဲဆိုပြီး တွေးလာ
ပါတယ်။တကယ်တမ်းအလှူကိုလဲရောက်ရော သူဌေးမကြီးဒေါ်ပုယောကျာင်္း မြင်းဖြူကြီး
ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လက်မလျှော့ပဲ နောက်တစ်ခါ ကြိုးစားပါတယ်။ဒီတစ်ခါတော့ရွာထိ-
ပ်မှာ ဇရပ်အကြီးကြီးတစ်ဆောင် ဆောက်ပြီး သူဌးကြီးဦးသာဒွန်းဆိုတဲ့နာမည်ကို အကြီး
ကြီးရေးပြီး ဒေါ်ပုဆိုတဲ့နာမည်ကို သေးသေးလေးပဲရေးထားပါတယ်။ ဒီဇရပ်ကိုတော့သူေ
ဌးကြီးဦးသာဒွန်းရဲ့ဇရပ်လို့ခေါ်မှာပဲဆိုပြီးတွေးနေပြန် တယ်။ဒါနဲ့ ဘယ်လိုိခေါ်မလဲဆိုတာ
ဆိုပြီး စိတ်ညစ်နေပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲ မထူးပါဘူးဆိုပြီး ဘုန်းကြီးဝတ်လိုက် ပါတယ်။ ဦးဇင်းဦး
သာဒွန်း ရွာထဲကိုဆွမ်းခံကြွတဲ့အခါကျတော့လဲ လူတွေကသူဌေးမကြီး ဒေါ်ပုရဲ့ဦးဇင်းကြွ
ဘူးဆိုပြီး ဘိန်းစားမယ်ဆိုပြီး ဘိန်းစားပါတော့တယ်။ အဲဒီတစ်ခါတော့ဦးသာဒွန်း နာမည်
စားမပဲသူ့ မိန်းမလောင်းရိပ်အောက်ကလွတ်တော့တယ်ဟီးဟီး.။အမျိုးသားများဒီဟာသ
မနီသည် အတန်းထဲတွင် အမြဲအိပ်ငိုက် လေ့ ရှိ သည်။တစ်နေ့ မနီအိပ်ပျော်နေစဉ်ဆရာမ
"မနီ ကမ္ဘာကြီးကိုဘယ်သူ ဖန်ဆင်းခဲ့လည်း"
င်နှင့် ထိုး၍သတိ ပေးလိုက်သည်။ထိုအခါမ
မနီ။ ။" ဘုရားသခင်" (လန့်သွားသဖြင့် ရောင်၍အော်လိုက်သည။်ထို့နောက်သူမပြန်လ-
ဆရာမ။ ။"တော် လိုက် တာ။နောက် တစ်ခု ထပ်မေးမယ်။တို့ ရဲ့ ကယ်တင်ရှင် ကဘယ်
ဆရာမမေး သည် ကို မနီမ မကြား။ အိပ်လို့ကောင်းနေသည်။ထို့ကြောင့်ကိုဖြိုးမှဘော့ပင်
ဖြင့် ထိုး၍သတိပေးရပြန် သည်။
မနီ။ ။(လန့်သွားပြန်သဖြင့် ရောင်၍ ထအော်ပြန်သည်၊ ထို့နောက်တဖန်အိပ်ပျော်ပြန်လေ
သည် ) " ဂျီးဆပ်ခရစ်"
ဆရာမ။ ။"မှန် ပါတယ်။ဆရာမနောက်ဆုံးတစ်ခုမေးချင်တာကတော့ ၂၃ယောက်မြောက်
ကလေး မွေးပြီးတဲ့နောက် မှာ ဧဝ က အာ ဒမ် ကို ဘာ ပြောခဲ့ လည်း။"
ဒီတစ်ခါတော့ ကို ဖြိုး အိပ်ပျော်နေသော မနီ ကိုဘော့ ပင်နှင့် နာနာထိုး၍သတိပေးလိုက်
သည်။မနီ အတော် နာ သွား သည်။ထို့ကြောင့် အိပ် ယာ မှ နိုးလာ သဖြင့်ရုတ်တရတ်ထ
မနီ။ ။"နောက်တစ် ခါ ငါ့ ကို ထပ် ထိုး ရဲ ထိုးကြည့် ၊ နင့် ဟာကိုထက်ပိုင်းချိုးပစ်မယ်"
မိမိထက် များစွာ ငယ်ရွယ်သောမိန်းမတယောက်ကိုလက်ထပ်ယူထားသည့် အသက်၉၃
နှစ်အရွယ်ရှိ အဘိုးအိုတယောက်သည် သူ၏ ဆရာဝန်ထံ ရောက်လာပြီးသူတို့ကလေးရ
တော့မည့်အကြာာင်း ပြောပြလေသည်။ထိုအခါ ဆရာဝန်က ပြန်ပြောပြသည်။
'ကျွန်တော် ပုံပြင်ကလေးတပုဒ် ပြောပါရစေ၊ တခါတုန်းကအလွန်သတိမေ့တတ်တဲ့လူတ
ယောက်ဟာ အမဲလိုက်ထွက်ပါတယ်။သေနတ်ကို ယူရမယ့်အစား ထီးတလက်ပဲယူသွား
ပါတယ်။တောထဲမှာ ဗြုန်းခနဲ ခြင်္သေ့တကောင်နဲ့ ပက်ပင်းတိုးမိတော့ သူကလက်ထဲမှာပါ
တဲ့ထီးနဲ့ ထိုးချိန်လိုက်ပြီး ပစ်ချလိုက်တယ်တဲ့။အဲဒီမှာခြင်္သေ့ကြီးလည်းတုန်းခနဲလဲကျသေ
ဆုံးသွားပါရော''ဟာ မဟုတ်တာကွ၊ လုံးဝကို မဖြစ်နိုင်ဘူး၊တယောက်ယောက်ကဝင်ပြီး
Posted by သဇင်ရနံ့at 09:35 No comments:
ဒုက္ခပေးလျှက်ရှိသော ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ စစ်တကောင်းသားမျ...
မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာကြောင့် ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံထားရသည့် ဂ...